10 Consumer nddị na 2017 ... Na Wardọ Aka ná Ntị! | Martech Zone
Amaara m na ọ bụ ọnwa Febụwarị mana anyị adịchabeghị njikere ịhapụ data gbasara amụma nke afọ a ga-abịa. Nyocha a na usoro ndị ahịa si GlobalWebIndex na-agbagwoju anya ma na usoro mgbanwe nke agwa ndị ahịa.
The Nddị 17 Report ọbụna adọ aka ná ntị na afọ a na-akpọ onodu ida nwere ike gbasaa site na isi mgbasa ozi mgbasa ozi na ngwa ngwa ozi ka ha na-agbakwunye ọrụ - na ndị ọrụ kwụsị itinye aka.
Laa azụ na 2012, onye na-ahụ maka ịntanetị nwere ihe dị ka akụkọ mgbasa ozi / ozi mgbasa ozi atọ - ugbu a, ọnụ ọgụgụ ahụ dị nso na asaa, nke pụtara na mbata nke ọrụ dịgasị iche iche na ọrụ pụrụ iche emetụtala etu ndị ọrụ netwọ na-emekọrịta na mgbasa ozi mmekọrịta. GlobalWebIndex Trends Onye nyocha Katie Young
Na akụkọ 60, GlobalWebIndex CEO Tom Smith na-ede banyere isi isi ihe isii na-akọwa oge a - na ndị ọkachamara na-akọwapụta usoro 10 dị mkpa iji lelee na 2017:
Mobile-Mbụ - A "mobile-mbụ odida obodo" na-eru nso, na ụdị na-adịghị prioritize mobile na-agba ọsọ nke ihe ize ndụ nke na-efu isi ohere na imebi mmekọrịta ha na-eto eto na-eji ọkụ.
Ekwentị mkpanaka zuru ụwa ọnụ - India, Philippines na Indonesia dị njikere ịghọ nnukwu ahịa ọhụụ maka ekwentị.
Egwuregwu Live Streaming - Ire ahia nwere ike ịbịaru nso egwuregwu - dịka egwuregwu ndị egwuregwu na-enweta traction. GlobalWebIndex data gosiri na otu onye n’ime mmadụ anọ n’ime ndị ọrụ elelela egwu egwu egwuregwu na ọnwa gara aga
Ahịa Facebook - Ahia ahia Facebook nwere ike iwepu, dochie ya ọdịiche dị n'etiti nyocha na ịzụta.
Vidio mmekọrịta - Otu mgbawa nke vidiyo ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta ga-enwe mmetụta dị ukwuu na atụmatụ ahịa na 2017.
content Marketing - Ikike e nyere ikike site ịrị elu nke ad-blocker na ndi mmadu na-achoghi ntaneti ka ha ghara ikwusi, nke pụtara na ndị ọchụnta ego na ndị mgbasa ozi kwesịrị iwere ụzọ ọhụụ, na-ewetara anyị nso nke ndị ahịa, ụwa ahịa na-azụ ahịa karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Ad-igbochi Ekwentị - Mgbasa ozi ngagharị ga-agbasa site na Asia ruo West, nke pụtara na mgbasa ozi mkpanaka ga-adị mkpa gaa na izipu ozi na-egbochighi na ọdịnaya dị mkpa.
Virtual Adị - Mobile nwere ike ịbụ nnukwu mmeri dị ka Virtual Reality na Augmented Reality (VR & AR) na ndị ahịa - 40% n'ime ha egosipụtala mmasị na iji isi okwu VR.
Snapchat - Snap nwere ike ịmalite mgbanwe mgbanwe teknụzụ wearable mgbe ọ gbanyere mkpịsị ụkwụ ya na mmiri na Snapchat Spectacles - ugogbe anya maka anwụ nke na-edekọ snippets vidiyo nke na-echekwa na Nchekwa Snapchat onye ọrụ. Ngwaọrụ a na - eji lens dị ogo 115 na - esegharị etu mmadụ si ahụ ihe.
Budata Consdị Ndị Ahịa 2017
Banyere Ndepụta Web Web
GlobalWebIndex bụ ụlọ ọrụ teknụzụ nke dị na London na-enye data ngosi ndị na-ege ntị gafere mba iri anọ na ụdị ndị kachasị ibu n'ụwa, ụlọ ọrụ azụmaahịa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Companylọ ọrụ ahụ na-ejigide otu panel zuru ụwa ọnụ nke ihe karịrị 18 nde ndị jikọtara ya na njikọta, nke ọ na-enye ike iji mepụta 8,500 isi data gbasara omume nke ndị ọrụ ịntanetị gburugburu ụwa. Ndị ahịa gụnyere Twitter, Google, Unilever, Johnson & Johnson, WPP, IPG na Omnicom Group nwere ike ịchịkọta nghọta miri emi banyere omume ndị na-ege ntị, nghọta na ọdịmma site na njikọta nyocha na nchịkọta data site na iji ikpo okwu GlobalWebIndex.
Tags: ad-igbochiarcontent MarketingỊgba Cha Chazuru ụwa ọnụindiaIndonesiaebi ndụmobile ad-igbochimobile iziziPhilippinessnapchatelekọta mmadụ videovirtual eziokwuvr